सरिफ सत्ताको समाप्ति अपेक्षित नियति
चार वर्षअघि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दै गर्दा नवाज सरिफले पाकिस्तानलाई ‘एसियाको टाइगर’ बनाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि तीव्र आर्थिक विकास जरुरी रहेको उनको ठम्याइ थियो ।
भोजपुरे खुकुरीको सान
भोजपुर खुकुरीले प्रसिद्ध छ । पछिल्लो समय भोजपुरे खुकुरीले महत्त्व पाउँदै गएको छ । दिनदिनै लोप हुँदै पनि गइरहेको छ । प्रयोग गर्ने चलन र उद्देश्य परिवर्तन भएको छ । उहिले यहाँका खुकुरी घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुन्थे ।
रुवान्डाको दुई दिन बसाइमा डुलेका सबै ठाउँहरूमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्थ्यो युद्धका घाउहरू । प्रस्ट देखिन्थ्यो आँसुको नदी । आँखैअगाडि उभिन्थ्यो पीडाको पहाड । गृहयुद्धले कहिल्यै निको नहुने गरी बनाएको यिनै घाउको खाटा देखाएर संसारभरका टुरिस्ट बोलाइरहेको थियो रुवान्डा ।
रेखा : ‘कभी नहीं देखा’ !
आजभन्दा लगभग पचास वर्षअघि चेन्नेई, त्यसबखतको मद्रासको कुनै ठाउँमा एउटी १४ वर्षकी केटीले एक रात, एउटा सम्बोधनबिनाको चिठी लेखी । चिठीको अन्त्यमा लेखी— ‘मलाई अब यस्तो जीवन चाहिँदैन ।’
दोस्रो साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिप पाँच वर्षअघि कोलम्बोमा भएको थियो । नेपालको फाइनल भिडन्त उही परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग भएको थियो । प्रतिस्पर्धाले रोमाञ्चक लय समात्न बाँकी नै थियो, नेपालले गोल गर्‍यो ।
सुदूरपश्चिम जिल्लामा भएको बेला पनि बडीमालिका दर्शन गर्नुभएन भने तपाईंले जीवनमा धेरै कुरा अनुभव गर्न पाउनुहुन्न,’ अघिल्लो वर्षका यिनै दिनहरूमा खप्तड यात्राबाट फर्कंदै गर्दा पुजारीले मलाई भनेका थिए । कामविशेषले बझाङ पुग्दा त्यहाँका मानिसहरूले पनि मलाई यस्तै सुझाएका थिए, ‘बझाङ आएको बेला पनि खप्तड नपुगेर हुन्छ ।’
प्रेमिल उपहार : ‘पफ्र्युम’
प्रेम गरिन्छ या आफैँ हुन्छ ?प्रेममा राजनीति र राजनीतिमा प्रेमको घुुसपैठ हुन्छ, हुँदैन ?बन्दुकको नालबाट बारुद होइन गुलाबको सुगन्ध निस्कियो भने ?प्रेमी–प्रमिकाको पुनर्मिलनमा निस्कने हर्षाश्रुमा कुन रसायन होला ?
जीवन भन्नु पनि अचम्मैको भाँडो हुँदो रहेछ । हो, कतै अरूको पकाउने भाँडो हुँदो रहेछ, कतै यो ‘आफूले तेरो ठाँडो’ हुँदो रहेछ, तर धेरैजसो चाहिँ घाँडो हुँदो रहेछ ! जीवनमा मैले न्याय र मानवताको खाँडो जगाएँ, तर यो कतिका लागि घोच्ने काँडो पो भइदियो, छेक्ने डाँडो पो भइदियो र मन नपरे पनि मुखमा कोच्ने फाँडो पो भइदियो ।
बुन्दै छ बुनकरहाते तानमा रातो रूमालरेशमको नरम धागोमारूमालसँगै बुन्दै तानमा
१८ वर्ष पुगेपछि चलनअनुसार औपचारिक डान्स पार्टी (बल) हरूमा जानुपथ्र्यो । तर, मलाई त्यस्ता पार्टीहरूमा जान मन पर्दैनथ्यो । त्यसैले म प्राय: चिडियाघर जान्थें । त्यति धेरै जान्थें कि त्यहाँका जनावरलाई मैले आफ्नै उमेरका केटीहरूलाई भन्दा पनि राम्ररी चिन्थें ।
अमेरिका एउटा सपना
साहित्यका वैकुण्ठ मानन्धर भनिदिए फरक पर्दैन कृष्ण धरावासीलाई । बिजुली गतिका यी अक्षर–धावकले पछिल्ला पाँच पुस्तक त अमेरिका बसेरै भ्याइदिए । २०४८ सालमा झापाबाट प्रकाशित ‘बालक हराएको सूचना’ बाट सुरु यी ५७ वर्षेको पेन्सन हुने गुन्जायस छैन ।